Midowga Musharraxiinta oo kulan la leh haweenka Soomaaliyeed | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharraxiinta oo kulan la leh haweenka Soomaaliyeed
Golaha Midowga Musharraxiinta ayaa kulan kula qaadanaya haweenka Soomaliyeed, Huteelka Jaziira oo fadhi u ah Musharixinta Mucaaraadka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulan u dhaxeeya Golaha Midowga Musharraxiinta iyo Ururada Haweenka ayaa hadda ka socda Huteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, kaas oo looga arrin sanayo xaaladaha siyaasadda ee dalka.
Kulankaan oo ah kii labaad oo dhex mara Mucaaradka iyo Haweenka Soomaaliyeed ayaa looga hadlayaa doorka ay haweenka ka qaadan karaan xal u helidda arrimaha la isku mari la’ayahay, ee la xariira Doorashoonka waddanka.
Maanta ayay ahayd markii Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021 ay la kulmeen, Odayaasha Dhaqanka, iyagoo ka wada hadlay xalka guud iyo sidii doorasho nabdoon dalka uga dhici laheyd iyo sidii odayaasha dhaqanka ay uga qeyb qaadan lahaayeen doorkooda kaga aadan badbaadinta masiirka ummadda Soomaaliyeed.
Magaalada Muqdisho ayaa marti galineysa shirarkii ugu badanaa ee looga xaajoonayo arrimaha Doorashooyinka, waxaana Maalintii afaraad galay kulanka u dhaxeeya Madaxda shanta Maamul Goboleed ee ka socda xeendaanka goroonka diyaaradaha, kaas oo ay maanta ku soo biireen qaar ka mid ah wakiillada Beesha Caalamka.